Tags: maze job
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း မရှာနိုင်ပါဘူး။ သင်ရော ဘယ်လိုလဲ။
အချို့ လူများ၏ ထင်မြင်ချက်များ
ထွက်ပေါက်ကို ရှာတာ လွယ်ပါတယ်။ အောက် ညာဘက်ထောင့်နားမှာပါ။
စထွက်နေရာ ကနေ အဲ့ဒီနေရာကို အရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နံရံအချို့ကို သင် မချိုးဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကို ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။
စပွိုင့်ကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ မှတ်ထားပါ။ ထွက်ပေါက်က ညာဘက်ထောင့်နားမှာလေ။ ဒီပဟေဋ္ဌိက အဖြေထုတ်လို့ ရတဲ့ ပဟေဋ္ဌိ ဟုတ်၊ မဟုတ် ကို တော့ မဖြေခင် အရင်မမေးခဲ့ဘူးလား။ LOL....
the enter spot is marked withahand. the exit is the bottom right corner, you didn't ask if the puzzle was solvable...lol
The question was to find the exit..it's at the bottom right corner. Solved! Getting from the entrance (hand) to that exit is not possible
So exit is written in the maze my 10yr old son found it before me cause I was too busy telling him that you can't make it through the maze haha